အဘိဓာန်များစုစည်းမှု (၉၆)အုပ် | Danya Wadi
»Other Dictionary»အဘိဓာန်များစုစည်းမှု (၉၆)အုပ်
Posted by danyawadi on October 22, 2019 in Other Dictionary
၃။မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၁)
၄။မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၂)
၅။မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၃)
၆။မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၄)
၇။သက္ကတ + အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ကထုတ်ဝေထားတဲ့ ကျမ်းတစ်စောင်ပါ
( 1 .5MB ) စာမျက်နှာ – ၄၆၄
ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်သော စကားလုံးများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ ဥပဒေအဘိဓာန်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစုထားပြီး စစ်သည်တော်စာပေမှ ထုတ်ဝေထားတာပါ။
၁၀။ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ အဘိဓာန်
ပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) ပုဒ်မများ နှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအဘိဓာန် နောက်တစ်အုပ်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစု ထုတ်ဝေထားတာပါ။
ပည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာဦးစီးအဖွဲ့ဌာနကထုတ်တဲ့ ခရီးဆောင် မြန်မာ အဘိဓာန် လေးပါ။
ပြုစုရေးသားသူကတော့ ဦးဟုတ်စိန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၁ မှာ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဦးဟုတ်စိန်ဟာ ဘီအေ (ဂုဏ်ထူး)၊ ဘီအယ်လ် ဘွဲ့ထူးများကို ရရှိထားတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ကို ပြုစုဖို့ နှစ် ၃၀ ကြာ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ မဉ္ဇူသကစာပေက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတယ်
ပါဠိ – မြန်မာ အဘိဓာန်
၁၄။သုတေသနသရုပ်ပြ ဘာသာရေး အဘိဓာန်
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်သြဘာသာဘိဝံသ ရေးသားစီရင်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။၂၀၀၇တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး PDF စာအုပ်အဖြစ် ဦးဖြူဝင်းမှ ထုတ်ဝေသည်။ ဗုဒ္ဓစာပေများကို အခြေပြုထားပြီး အတော်ပြည့်စုံသည့် မြန်မာလူမျိုးများ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည့် အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်သည်
၁၆။အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ခရီးဆောင် အဘိဓာန်
ဦးဆန်းလွင်(အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ရေးသားပြုစုထားတဲ့2in 1 Travellers မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအဆိုအရ မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို လေ့လာလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာလို့သာ ပြောရတယ်။ တကယ်ရေးသား ထားတာတွေက မြန်မာအသံထွက် အင်္ဂလိပ်စာ Burglish တွေနဲ့ပါ
ဂျော့ဟောင်းက ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ စာအုပ်ကို စတင်ပြုစုခဲ့သူပါ။ သူရဲ့ ဝေါဟာရကျမ်းဟာ အဘိဓာန်ဖြစ်ဖို့ အဆင့်မလုံလောက်သေးပေမယ့်လဲ ဒါဟာလဲ ကျွန်တော်စိတ်ထင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး လမ်းစတစ်ခုလို့တော့ ထင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၄၂၄ မျက်နှာရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီရမ်ပိုလ်(Serampore)ကနေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်
ယုသဒန်က ၁၈၄၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာသဒ္ဒါ ဆိုပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ မြန်မာစာ သဒ္ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းဆိုချက်များနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ရ၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၄၂ ခု ဂျူလိုင်လတွင် မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ အဘိဓာန် မဟုတ်ပေမယ့်လဲ လေ့လာကောင်းမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ
ဂျော့ဟောင်းဟာ ၁၈၄၅ ခုနှစ်ကြမှပဲ သူကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်ကို အင်္ဂလိုဘာမား အဘိဓာန်ဆိုပြီး နာမည်တပ်ခဲ့သော အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၃၄၆ မျက်နှာရှိတဲ့ ဒီအဘိဓာန်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ
ယုသဒန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ပထမအကြိမ် ဇန်နဝါရီ ၁၈၄၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၅၈၉ မျက်နှာ ပါရှိပြီး သူခေတ်သူ့ကာလက သူ့အရင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ချာလိန်းအဘိဓာန်နှင့် ဂျော့ဟောင်းအဘိဓာန်တွေထက် အဘိဓာန် ဟုခေါ်ဆိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လှတဲ့ အဘိဓာန်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မော်လမြိုင်မြို့မှနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ
မြန်မာနှင့် မြန်မာလူမျိုးများ စာအုပ်ကို Kenneth Robert Henderson Mackenzie ကရေးသားသည်။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာမျက်နှာ ၂၁၂ ပါရှိသည်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းကို အင်းဝလက်ထက်မှ စပြီးဖော်ပြထားသည်
ယုသဒန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓာန်ကို နောက်ထပ်ပြီး ဒုတိယအကြိ်မ် (၁၈၆၆) ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ တတိယအကြိမ် (၁၈၇၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ) မှာတစ်ကြိမ် မူလပထမ အဘိဓာန်စာအုပ်ကို စာလုံးအသစ်များ ထပ်မံဖြည်ပြီး ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးယုသဒန်ဟာ ၁၈၅၀ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းတို့မှာ သူကိုယ်တိုင် မဟုတ်သော်လည်း သူ၏ မူရင်းအဘိဓာန်များကို အခြေထားတဲ့အတွက် ယုသဒန်(ဂျက်ဆင်) အဘိဓာန်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားရတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်မိပါတယ်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းကို ရန်ကုန်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မူလ အဘိဓာန်ကို အခြေခံပြီး စာလုံးအဓိပ္ပါယ်အသစ် ၅၀၀ ထပ်ပေါင်းထည့်ထားသည်။ စာမျက်နှာ ၈၄၆ မျက်နှာရှိပါသည်
(ဒေါင်းလင့်ရှာတာမရလို့ နည်းပညာသမားကို အကူအညီတောင်းလိုပါတယ်ခဗျာ ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခဗျ – စာအုပ်လင့်ပေါင်းစုံ )
အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ နှင့် ဘာသာစကားပြောစာအုပ်ကို Rev.C.Bennett က ပြုစုခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင် M.H.Eveleth က စိစစ်တည်ဖြတ်ပေးထားသည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၁၅၇ မျက်နှာပါရှိသည်
၂၆။Burmese Pocket Dictionary By Adoniram Judson (1887) PDF မူရင်းနေရာ (or) Digital General Collection
မြန်မာပေါ့ကဒ် အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ယုသဒန်ရဲ့ အဘိဓာန်စာအုပ်မှ မှီငြမ်းကိုးကားထားပြီး အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ ပြန်ဆိုမှုကို F.D. Phinney,M.A ဆိုသူက ပြုစုပြီး မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်ကို F.H. Eveleth ဆိုသူက ပြုစုထားတာဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ ၃၈၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၈၇ ဇန်နဝါရီမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
၂၇။The Judson Burmese-English dictionary (1921) PDF မူရင်းနေရာ
ယုသဒန်၏ အဘိဓာန်ကို အခြေပြုပြီး Robert Charles Stevenson (1851- 1905) နှင့် Frederick Howard Eveleth(1843-1932) တို့က စီစစ်တည်းဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးမြန်မာ၏ အကူအညီများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။စာမျက်နှာ ၁၁၃၅ မျက်နှာရှိသည်။ တကယ်အသုံးဝင် လေ့လာစရာကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်
( ဒီစာအုပ်က ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် ဒေါင်းလို့မရသေးပါခဗျာ ကွန်ပျူတာနဲ့ဒေါင်းတဲ့သူများ ကူညီပြီးဒေါင်းကာ လိုင်းပေါ်ပြန်မျှဝေပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခဗျ
၂၈။မြန်မာ – ပြင်သစ်အဘိဓာန်(2004) မူရင်းနေရာ
မြန်မာ ပြင်သစ် အဘိဓာန်စာအုပ်တွင် စကားလုံး ၆၅၀၀ ခန့်ပါရှိပြီး ပြုစုသူမှာအရှင်ဓမ္မသာမိ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေပါသည်။
( 800 KB ) စာမျက်နှာ – ၁၃၂
၂၉။ထိုင်း + မြန်မာ အဘိဓါန်
( 12 MB ) စာမျက်နှာ – ၃၄၆
၃၁။ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
၃၂။ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
(4MB ) စာမျက်နှာ – ၆၃၈
( 1 .8 MB ) စာမျက်နှာ – ၁၅၅
( 27 MB ) -စာမျက်နှာ – ၁၁၀၃
( 11 .6MB ) စာမျက်နှာ – ၆၄၈
၆၁။ တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၁ )
၆၂။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၂ )
၆၃။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၃ )
၆၄။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၄-က )
၆၅။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၄-ခ )
၆၆။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
သရတွဲ အတွဲ ( ၄-ဂ )
၆၇။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
က-ဝဂ် အတွဲ ( ၅ )
၆၈။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
က – ဝဂ် အတွဲ ( ၆ )
၆၉။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
စ – ဝဂ် အတွဲ ( ၇ )
၇၀။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
စ – ဝဂ် အတွဲ ( ၈ )
၇၁။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
တ – ဝဂ် အတွဲ ( ၉ )
၇၂။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
တ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၀ )
၇၃။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
တ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၁ )
၇၄။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
တ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၂ )
၇၅။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
ပ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၃ )
၇၆။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
ပ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၄ )
၇၇။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
ပ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၅ )
၇၈။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
ပ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၆ )
၇၉။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
အ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၇ )
၈၀။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
အ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၈ )
၈၁။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
အ – ဝဂ် အတွဲ ( ၁၉ )
၈၂။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
အ – ဝဂ် အတွဲ ( ၂၀ )
၈၃။တိပိဋက ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်
အ – ဝဂ် အတွဲ ( ၂၁ )
ကုန်သွယ်စီးပွါး အဘိဓာန် (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ )
ပါဠိ – အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
ရှေးဟောင်း ပျူ-မြန်မာ အက္ခရာစာပေသမိုင်းနှင့် ပျူအဘိဓာန်
( 10 MB ) စာမျက်နှာ – ၁၄၇
( 1 .3MB ) စာမျက်နှာ – ၄၃၈
( 25 .14 MB ) စာမျက်နှာ – ၇၂၂
မူလတင်ထားသော ဆရာတော်များနှင့် ကိုကို မမများ
( စာအုပ်လင့်ခ်ပေါင်းစုံမှ ကူးယူဝေမျှပါသည်။)
← အမှုဖွင့်ချင်ပေမယ့် ရဲက အမှုမဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် နည်းလမ်းများ
“Rohingya Ethnic Nationality” by Dr. Maung Zar Ni →